Ukuxhaphaza i-twitter: Yiba ne-Inspired-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2010 Internet kunye neBlogs, egeomates My
Ukuba umzala wam wayesebenzisa i-twitter, intambo yomama wam (QDDG) yayiza kuba nobomi obungcono.
Izinto ezininzi zitshintshile ngendlela ezitsha zichazwe ngayo. Ubomi benza iminyaka eyi-35 elula, emva kwelanga lesibini leeklasi -kuba babini- akukho nto ifanelekileyo, akukho msebenzi wesikolo, akukho mvavanyo, akukho mfundiso yabazali -ayenzanga njengamhlanje-. Umzala wethu Wil, nge-inertia, wenyuka esuka kwindlu yakhe emanxwemeni omlambo ukuba achithe emini emzimbeni wethu, emdlalweni omdala ongazange uphonse imbewu ye-cashew nut enqeni. Ngaphantsi kwe-tamarind eneqabunga, iiyure zigqityiwe kungekho nantoni eyenzekayo kwintendelezo enothuli. Lowo ulahle enye imbewu, eyona ayifumana.
Yonke into umhlobo wethu ayenayo ukuqokelela inzuzo yakhe, unyikothulise uthuli entombeni yakhe kwaye uziphose phantsi emanqeni phambi kwe Unina uLeda Ndiya kuthetha sesibini Wiiiiilllll !!! sele sele i-inshorensi ye-combo yayiquka isijeziso.
Iminyaka emithandathu edlulileyo, i-imeyile yindlela yokusixelela ukuba wayiphumelele ibhaso kwii-Awards. Konke sasilinde ukuba uJuan, kunye nesigqeba sakhe seburhulumenteni, wayeya ku lumkisa ukuba sasisondele kakhulu, ukuba sasiphelile, ukuba asizange siphuphe kodwa asizange siphele ithemba, ukuba siphumelele.
Ngoku, kwi-Inspired 2010, izinto ezikhutshelwe ipakethe zifana, ziqhelekile, nangona zingekho zonke:
Ikopi ephindwe kwakhona "Unyaka wokuPhulwa koMhlaba"Oku kuya kuba kwincwadi yam yokubhuka malunga neyeshumi iminyaka,
Ipeni elihle kunye ne-silkscreen allusive, eya kuqokelela intombi yam iminyaka eyi-5, ngelixa eba ngumntwana oselula kwaye uyithumele kwi-trunk ye-cursilerías,
Omnye pintosa incwadi ekhunileyo engenzi ukuba ufuna ukukhangela, ndingathanda ukuyigcina kwiqoqo kodwa unyana wam uya kuphuka ngeveki kunye imidwebo emangalisayo,
Iphephancwadi eneprogram yesiganeko esilahlayo kwiintsuku ezintathu.
Kwaye i-flyer ithi kule leta:
Ewe nkosi, iintanethi zentlalo ziye zatshintsha indlela esilumkisa ngayo. Njengomngcwabo omncinci ka-anti xa ebiza UWilfredo, ukubingelelana okulungileyo kukaJeff Thurston yaziswa kwiVector1 Kuye kwazwakala ngaphambi kokuba umcimbi uqale. Ummeli weendaba zoluntu, -njengoko kubiza oko- kuya kwenza okufanayo kunye nawaphi amaphephancwadi eendwendwe ezenzayo, ezinye ziyiminyaka ebaluleke kakhulu, ezinye iifesti ezizimeleyo kwi-niche yethu. Konke ukuhleka kunye neenyembezi zabazalwana bakaBentley, abaxhasayo, abaphumeleleyo kunye nale post bayakuvakala kwi-twitter.
Kuze kube namhlanje ndiye ndaqonda isiqingatha semodeli yoshishino Facebook, nangaphezulu okanye ngaphantsi ndicinga ukuba ihamba nini ne-intanethi yayo. Kuyafana ndandifuna ukuba ndihlaziye ingcamango yoshishino lokusondeza izikhuku ezinkukhu. Kodwa ukuqonda i-twitter kubonakala kuyinkimbinkimbi, siyayigcina xa sibona isebenza apha, nangona kungengomntu oqhelekileyo ukuba unokucinga ukuba yintoni inkonzo eya kuhamba khona into eyona nto kuphela:
Yiyo kanye into oomama ayenzayo, ekhwaza, eyahlukileyo neyethu xa siphikisana ngenxa yokuba umntakwethu wayehlala esenza -kwaye ngelo xesha- sisibatha. Kodwa esebenza, kwaye efanayo kunye twitter, kuba inzululwazi ayikho intaka engaqhelekanga yasezulwini oluhlaza, kodwa enegunya ukwethula it. Xa Dell, Bentley, CNN, Univision kunye nezinye iinkampani ezinkulu beka intaka blue ephepheni, siyayiqonda into isakhono le nkonzo microblogging eyeza ukunika ukusetyenziswa ngakumbi uphawu neesimboli @ kunye yesi #.
Kuqhelekileyo ngoku, ukukhankanya abantu abadumileyo kule ndawo yentlalo nangaphambili. Nangona kuninzi, amawele! izilumkiso ezingenasiphelo ezivela kumnxeba, kunye amagumbi ngxabano, autospam kunye nabantu benza isandi kuyo yonke igesi abayikhululayo. Yaye kungekhona nje nge-twitter kodwa ngeeplani eziphumayo njengento ecasulayo Buz yeGoogle! Kodwa ubuchule bomdali we-twitter buya kuhlala buya kuthi: ukuqonda okusemgangathweni kufakwe kwifomu emfutshane ebambelele kwiibalo ze-140. I-twit elula! ekhwaza xa umsebenzisi ene 50,000.
Ngaloo ndlela ubomi, ukutshintsha, ukungena ngokukrakra kwabo bafumana olunye usuku ngokuzenzekelayo nge-AutoCAD 11 kwi-286, kunye nemvelaphi emnyama kunye nobumba be-orange. Kodwa yile ndlela ezi zithintelo ngayo, ezingalindelekanga ekuqaleni kwaye ziqikelelwa ekugqibeleni, njengoko kuya kuba kule post:
Apha ungasilandela kwi-twitter.
Post edlulileyo«Edlulileyo Amsterdam and more
Post Next UBentley ufuna ukugqithisa kwakhe kudume kakhuluOkulandelayo "